Isbedelka nololeed ee la soo gudboonaaday qooysaska dib u midoobey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isbedelka nololeed ee la soo gudboonaaday qooysaska dib u midoobey
La daabacay fredag 14 juni 2013 kl 15.06
Qooyska wada socda waxay i soo xasuusin jireen ilmaheyga
Nimco oo shan bilood hortood ey midoobeen hooyadeed. Sawirle: Kenadid Mohamed
Maxamed iyo idwaan Cabdiraxmaan. Mideeynta qaaabada. Sawirle: Kenadid Mohamed
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayey dib ugu kulmayeen dalkan Iswiidhen qaraabada soomaaliyeed ee qaxu kala geeyey, kadib wax ka bedelkii xeerkii sahlayey in soomaalida laga dul-qaado culeeyskii ahaa ina lagu xiro iney caddeeyn la yimaadaan sidii ey dhallaanka/waalid, seeyga/seeyaddu meel ku wada noolaadaan. Haddaba booqasho aannu ugu tagney magaalada Tierp qooysas soomaaliyeed oo dib loo mideeyey ayaan kula kuklanney hoyooyin iyo dhallaan sannado kala maqnaa oo suurtagal u heley iney dib u midoobaan iyo sidoo kale is-bedelka noloshooda ku dhacey.
Wel welka ay Faadumo Ibraahim Cabdulle ka sheeganeeyso muddada yar oo ay garoonka dayruurradaha ku sugaysay iney soo caga dhigato dayuurad ey saarnaayeen labadeeda wiil Ridwaan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed si ey hooyadood ula midoobaan, hase yeeshee uu uga horeeyey sugitaan saddex sannadood ah oo ey kala maqnaayeen. Iydoona ey middaasi ugu wacnayd caqabadihii sannadihii ugu dambeeyey hareeyey waalidiinta iyo qaraabada kala maqan ee soomaalida ku dhaqan dalkan swiidhen:
Ridwaan iyo Maxamed Cabdiraxmaan oo ah dhallaan aan weli qaan-gaarin ayaa dalka yimid 21-kii bishii maajo, halkaasina ugu dhammaatay muddo saddex sannadood ah oo ey noloshu kala geeysey hooyadood. Hase yeeshee muddo iminka cagacageeyneysa labaatameeyo maalmood ey hooy kula noolyihiin hooyo Faadumo Ibraahim Cabdulle.
Hoy ka kooban saddex qoowladood oo ka mid ah daaraha ku yaala waddada Bergsgatan ee magaalada Tiep ayey ku dhaqneeyd Faaduma Ibraahim Cabdulle halkaasina oo ey kula midoowdey dhallaankeeda,
Saacaddu waa abaaraa kow iyo tobankii subaxnimo kolkii aan booqasho ugu tagay Faadumo Ibraahim iyo labaeeda wiil. Faadumo Ibraahim waxey ku mashquulsaneyd nadiifinta aqalka fadhiga, oo ey marti badani guruiga ugu timid maalintii ka horeeysay si ey u soo booqdaan dhallaanka yimid ulana qeeybsadaan farxadda, kullammada noocaasina oo aan horey u dhici jirin. Halka uu Maxamed markaa hurdada ka kacay, Ridwaana aanu weli indhaha kala furin.
Maxamed iyo Ridwaan Cabdiraxmaan waxey ku barbaareen dalka Yeman oo waalidkood u soo qaxeen muddadii lagu jirey dagaalka sokeeye, halkaasina oo uu ku geeriyoodey aabbahood Cabdiraxmaan Maxamed, muddadaasina oo hooyo Faaduma Ibraahim ku sugneeyd dalkan Iswiidhen. Maxamed ayey luuqadda soomaaligu ku adag tahay, halka uu Ridwaan oo ah wiilka labada yar uu khasbanayo inuu soomaaliga igula hadlo.
Muddadii aan wareeysiga ku jirney ayaa booqasho waxaa xaafadda ku timid hooyo Ubax Xoosh oo ay la socoto gabadheeda Nimca oo dalka ku sugneeyd muddo shan bilood ah iyadoo ay wixii intaa ka horeeyay kala maqnaayeen sida hooyo Faaduma iyo ilmaheeda muddo afar shan sannadood ah oo uu kala geeyey qaxa iyo dagaalka sokeeye. Ubax Xoosh Gaashaan oo kullamada noocan ah ee dhallaanka iyo waalidka muddada kala maqnaa kaga horeeysay Faaduma Ibraahim ayaa noo sheegtay in nolosheedii uu is-bedel weyni ku dhacay kolkii ey ilmaheeda midoobeen, hase yeeshee ey sida Faaduma Ibraahim ey muddadii ey reerku kala maqnaayeen geeriyoodey ilmaha aabbahood.
Inkasta oo Maxamed iyo Ridwaan ey dalka ku sugnaayeen muddo gaaban oo maalmo ah ayey haddana u suurtagashey iney helaan meherad ey isku mashquuliyaan muddada iskuulaadku xiran yihiin ee fasaxyada kuleeylaha lagu jiro, iyagoona heley koox dhallin-yaro da’dooda ah oo ey kubbadda wada ciyaaraan. Halkaasina oo ay hooyo ka soo diiwaan-gelisay. Iyadoona la gaaray saacaddii la aadi lahaa tababarka.